အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိ, Bwin ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားလောင်းကစားခြင်းနေရာများအဖြစ်သင်ကြားဖူးသည်မှာသေချာသည်, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်သစ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခု. သင်ရွေးချယ်လိုသောအားကစားပွဲတွင်လောင်းကစားရန်သင်၏ဆန္ဒကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ပေးရန်အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်သည်. Bwin သည်အားကစားလောင်းကစားတွင်အလုပ်လုပ်သည်, ဖဲချပ်နှင့်လောင်းကစားရုံ.
တစ်ရာနိုင်ငံများတွင် operating, ပြင်သစ်အပါအဝငျ, ကအကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်အားကစားလောင်းကစားဝိုင်းနေရာတွင်နေရာတစ်နေရာယူကြောင်းရှင်းပါတယ်. Bwin သည်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်အေစီမီလန်ကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ကလပ်၏တွဲဖက်ဖြစ်သည်. Bwin ပြန်လည်သုံးသပ်, ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်, ပြောဖို့နေရာ, ကြိုဆိုပါတယ်, မိမိအပရိုမိုကုဒ်များ, နှင့်လောင်းကစားအမျိုးအစားများနှင့်အခြားအားကစားများစွာရှိသည်. ဒီတော့, bwin အားကစားလောင်းကစားကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသင်သိသည်.
Bwin.fr ဟာ gamer ရဲ့ပရဒိသုလို့မင်းခေါ်လို့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်. စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး: ဖဲချပ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှစ်ခုလုံးပါသောဝက်ဘ်ဆိုက်!
ထိုအချိန်မှစ၍ Bwin သည်ဈေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် 1997! ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအပြည့်စုံဆုံးလေလံပွဲကိုပေးသည်.
၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အားသာချက်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်.
ဟောင်းပြင်သစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောလုံးသမား Robert Pires သည်လည်း Bwin သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်, အဘယ်သူသည်ကစားသမားများအတွက်အထူးစစ်ဆင်ရေး၏နံပါတ်ကြေညာခဲ့သည်!
ဒါကြောင့် bwin.fr မှာကစားသမားအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်. Poker Room သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော software နှင့် Mac နှင့်သင့်လျော်သည်, နှင့်ပြိုင်ပွဲနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များအများကြီး. အဓိကတိုက်ရိုက်ဂြိုဟ်တုပြိုင်ပွဲကိုသင်ပုံမှန်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်.
ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ဒါ့အပြင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖဲချပ်ဝေအခန်းကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်, အရာပုံမှန်သို့မဟုတ်ထိုင် -and သွားပြိုင်ပွဲသည်အားလုံးဘတ်ဂျက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်, ကွမ်းခြံကုန်း, နှင့်သင်တန်းငွေသားဂိမ်းစားပွဲ.
ပဲရစ်အားကစားအပိုင်းလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏, ပြင်သစ်မြို့အတွက်အလွန်ပြည့်စုံသောကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ. အဆိုပါ site ကိုလက်တွေ့ကျကျနှင့်သွားလာရန်သာယာသောဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အလောင်းအစားလူတိုင်းကသူတို့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်.
မြှင့်တင်ရေးသည် Bwin ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်, အပိုဆုများဖြစ်ကြသည်, အခမဲ့ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်အလောင်းအစားလက်မှတ်များ (သို့မဟုတ်အစားထိုး) ကစားသမားအသစ်များအတွက်.
နောက်ဆုံးတော့, သငျသညျ Bwin အားလုံးခံစားနိုင်ပါတယ် (ဖဲချပ်နှင့်အားကစားလောင်းကစားခြင်း) သင့်ဖုန်းတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချပရိုဂရမ်မှတဆင့်.
တိုတိုပြောရရင်, အကယ်၍ သင်သည်ဖဲချပ်နှင့်အားကစားလောင်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်လျှင်, Bwin နဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းများစွာရှိတယ်။ မင်းအနိုင်ရတယ်!
ဆိုက် : Bwin ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောမျက်နှာပြင်တစ်ခု
Bwin site မှာကောင်းတဲ့တင်ဆက်မှုတစ်ခုရှိတယ်, အနည်းငယ်အလေးအနက်ထားပေးပို့သည့်လွှမ်းမိုးအနက်ရောင်အရောင်နှင့်အတူ. ပင်မစာမျက်နှာတွင်, သင် site ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားကစား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ရှာဖွေတာအခက်အခဲရှိလိမ့်မည်, ပရိုမိုးရှင်းများ, ပြိုင်ပွဲ, ဖဲချပ်ဂိမ်း, စသည်တို့. "Paris အားကစား" ကိုနှိပ်ပါ။, သင့်တွင် Bwin အားကစားလောင်းကစားအတွက်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာရှိသည်, အားကစား, ငွေထုတ်, တိုက်ရိုက်မီးမောင်းထိုးပြ, အလောင်းအစားအမျိုးအစားများနှင့်အခြားအချက်အလက်များစွာရှိသည်.
Ergonomics သည်အရေးကြီးပြီးဤ Bwin အားကစား၏ဂုဏ်သတင်းကိုထုတ်ဖော်သည်. သငျသညျအစပြုသူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိမရှိ, သငျသညျအညွှန်းမြန်နှုန်းနှင့် site ၏တင်ပြချက်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်. နှင့်သင်တန်း၏, သင် "register" ခလုတ်ကိုလျင်မြန်စွာမြင်ရလိမ့်မည် / ဂျာနယ်»«သင်၏မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ.
ဂိမ်းများ, TOURNAMENTS နှင့်ပြိုင်ပွဲ
သင်သည်အားကစားလောင်းကစားများ၌အသစ်ဖြစ်နေပြီလားသို့မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့သည်, မတူညီသော Bwin အလောင်းအစားများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်.
သင်ဟန်းဆက်ကိုကြိုက်လျှင် (တစ်ချိန်တည်းတွင်ဂိမ်းများစွာကစားနိုင်သည်), bwin ပင်သင်တို့ကိုတက်ပေးထားပါတယ် 50% (Multicash ထက်အားသာချက်), သင်ရွေးချယ်သည့်အလောင်းအစားအရေအတွက်ဖြစ်သည်! ဒီတော့, အပိုဆုကြေးဖြစ်လိမ့်မည် 5% မှ3ပေါင်းစပ် paris (သင်သည်သင်၏ handset ကိုအနိုင်ရလျှင်), အထိ 50% ပေါင်းစပ်လောင်းကစားဆုရရှိသူ၏ 13 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်.
သင်ထက်ပိုပြီးလောင်းနိုင်သည် 20 အားကစားစည်းကမ်းများကိုနှင့်အမြဲတမ်း: အားလုံးအဓိကကွဲပြားမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ဘောလုံး (နှင့်အသေးစားပင်) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး, တင်းနစ်, တောင်း - ဘောလုံး, гандбол, F1 ကို, မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ, ဟော်ကီ, ဘော်လီဘော, ရပ်ဘီ , စားပွဲတင်တင်းနစ်, စက်ဘီးစီးခြင်း, လက်ဝှေ့သမား, နှင့်ဘေ့စ်ဘော, အမေရိကန်ဘောလုံး, ဂေါက်သီး, နှင်းလျှောစီး, ဘိလိယက် ... အထူးအခါသမယဖော်ပြရန်မဟုတ်.
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျတိုက်ရိုက်အလောင်းအစားနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဤသည်နေ့ရက်ကာလလိုအပ်ချက်တစ်ခု, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့!
ရိုးရာဂိမ်းများအပြင်ငွေသားပါတီဖဲချပ်ကိစ္စ (လက်စွပ်ဂိမ်း) ပြိုင်ပွဲစီးရီးကနေ, သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းထဲမှာထိုင် -and (တစ်ခုတည်းနှင့် Multi- စားပွဲပေါ်မှာ, သေနတ်ပစ်, လက်ဆောင်များအတွက် Head-up, အတိမ်အနက်ကို, ချီတက်ပွဲ, …) , အာမခံဆုပြိုင်ပွဲ, အဓိကပြိုင်ပွဲစီးရီး (နွေရာသီဖဲချပ်ပြိုင်ပွဲလိဂ်), အသစ်ထိုင် -and go တာဘို jackpot ( Bwin မှ "JAQKpot") ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အတူ 5000 ကြိမ်ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေ, လူကြိုက်များအခမဲ့ပြိုင်ပွဲဖော်ပြခြင်းမ (ကွမ်းခြံကုန်း).
10.000 ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများကအာမခံချက်ပေးထားသောတစ်ရက်လျှင်ယူရို€, 25 000 €တနင်္ဂနွေနေ့, နှင့်ပင်အထိ 100 000 တစ်လလျှင်ယူရို!
သင်တို့သည်လည်းအဓိကတိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါတယ်, National World Poker Tour ဆားကစ်အပါအဝင် (bwin အပါအ ၀ င် / PartyPoker သည်မိတ်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်)!
Next Next post: Bwin ဆုကြေးငွေ